Royal Caribbean na -ewetara Jamaica ụgbọ mmiri ọhụrụ na Nọvemba 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Royal Caribbean na -ewetara Jamaica ụgbọ mmiri ọhụrụ na Nọvemba 2021
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica, Edmund Bartlett, (2nd R) na Royal Caribbean International's - osote onye isi oche nke ụlọ ọrụ, Donna Hrinak (nke abụọ L) na -ese foto; Onye osote onye isi oche nke ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ, Hernan Zini (L) na osote onye isi mmekọrịta mmekọrịta gọọmentị, Russell Benford, na Miami, Florida n'izu a.
Royal Caribbean International, ahịrị ụgbọ mmiri nke abụọ kacha ibu n'ụwa, site n'aka ndị otu ndị ndu ha gwara onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, na Miami, Florida, n'izu a na ha ga -amaliteghachi ọrụ na Jamaica na Nọvemba nke afọ a.
Usoro ụgbọ mmiri Royal Caribbean na -achọsi ike were puku kwuru puku ndị Jamaica n'ọrụ.
Companylọ ọrụ ụgbọ mmiri ahụ ga -enwe ike ịkwalite njem ụgbọ mmiri na Jamaica nke ukwuu, na -ebubata iri puku ndị ọbịa njem ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke.
Mmezu nke mmezi iwu gọọmentị bụ ihe achọrọ ọzọ iji mee ka ihe a niile bụrụ eziokwu.
Ndị isi ụlọ ọrụ ahụ gbakwụnyere na ozugbo enwere ọtụtụ ihe ndekọ - ụfọdụ n'ime ha nọ na mpụga Jamaica - ha ga -enwe ike ịkwalite njem ụgbọ mmiri na Jamaica, na -ebubata iri puku kwuru puku ndị ọbịa njem ụgbọ mmiri ọgwụ mgbochi. Ndị isi ụlọ ọrụ ahụ kwughachiri ọchịchọ siri ike ha nwere iji were puku kwuru puku ndị Jamaica n'ọrụ dị iche iche ma na -eche mmegharị iwu gọọmentị ga -eme ka ọ bụrụ eziokwu.
Na nzaghachi, Minista Bartlett kwupụtara obi ụtọ na "Royal Caribbean ga-ebido ịkwọ ụgbọ mmiri na Jamaica mgbe ihe karịrị otu afọ na ọkara kwụsịtụrụ n'ihi ọrịa COVID-19. Anyị nwere ihe ole na ole dị mkpa iji dozie ozugbo ka ha nwee ike ịkwalite njem ụgbọ mmiri na Jamaica na nloghachi na -akwalite ndụ akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze nke puku kwuru puku ndị Jamaica na -adabere na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na ozugbo. Na agbanyeghị na gọọmentị ga -aga ngwa ngwa n'ịkwalite mbọ ụgbọ mmiri iji were puku kwuru puku ndị Jamaica, maka ihe bụ ohere ọrụ na -atọ ụtọ n'ezie nke ga -enwe mmetụta dị mma maka ọtụtụ. A na -achọ ndị obodo anyị, ahịrị ụgbọ mmiri amara nke a nke ọma. ”
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica, Edmund Bartlett, (3rd R) na -eji oge foto ya na osote onye isi oche Royal Caribbean International Corporate Affairs, Donna Hrinak (4th R) yana site na L - R, onye ndụmọdụ na onye na -ahụ maka njem nlegharị anya, Delano Seiveright; Onye nlekota ndị njem nlegharị anya nke Jamaica (JTB) Donnie Dawson; Onye isi oche nke JTB, John Lynch; Hernan Zini bụ onye osote onye isi oche nke Royal Caribbean International nke ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ. Onye isi nlegharị anya, Donovan White na Royal Caribbean International's Vice President nke Mmekọrịta Ọchịchị, Russell Benford.
Ọganihu ọhụrụ na -abịa na -eso nzukọ ọzọ nke Minista Bartlett na ndị otu ya na Onye isi oche nke Carnival Corporation, ụlọ ọrụ Cruise kachasị n'ụwa, Arnold Donald na ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị na Miami ebe ha kọọrọ atụmatụ maka njem ụgbọ mmiri 110 ma ọ bụ karịa. ihe karịrị ndị ọbịa ruru puku abụọ gbara ọgwụ mgbochi ọgwụ na Jamaica n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ. Ebumnuche a dabere na njikọta chiri anya n'etiti ndị ọchịchị Jamaica na Carnival na ngwa agha.
Bartlett sonyeere Onye isi oche nke Board Jamaist Tourist Board, John Lynch; Onyeisi njem nlegharị anya, Donovan White; Senior Strategist na Ministry of Tourism, Delano Seiveright na osote onye isi njem nlegharị anya maka America, Donnie Dawson. Ntinye aka nke Royal Caribbean International bụ otu nzukọ nke ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ njem, gụnyere ndị isi ụgbọ elu na ndị ọchụnta ego, n'ofe nnukwu ahịa Jamaica, United States na Canada. A na -eme nke a iji mee ka ọnụ ọgụgụ ndị mbata na -abata ebe a na -abịa n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ, yana ịkwalite itinyekwu ego na mpaghara ndị njem.
Industrylọ ọrụ ụgbọ mmiri so na ndị ọrịa COVID-19 kacha emetụta, mechie ụlọ ọrụ ahụ ihe karịrị otu afọ. Agbanyeghị, site na usoro ahụike na nchekwa siri ike na ụlọ ọrụ njem ụwa niile, gụnyere ndị njem na ndị ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke, ụlọ ọrụ ahụ ejirila nwayọọ nwayọọ maliteghachi ọrụ n'ọtụtụ ebe gụnyere Jamaica.